Shiinaha S6 LED SOLAR STREET LIGHT 20W-60W soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Hangchi
Nalalka iftiinka LED
Ka sokow nalka weyn, iftiinka gaarka ah ee deegaanka ayaa qurxiya agagaarka.
Way fududahay oo sahlan tahay in lagu hayo dhinaca hore.
Alaab ceyriin oo heer sare ah
Guryaha shubka aluminium ee cadaadiska sare leh oo isku dhafan, oo leh naqshad dhumuc weyn leh, oo leh kuleel ka sii fiican iyo karti ka hortagga daxalka, iyo cimri dherer. Qaab dhismeedka la xoojiyay wuxuu u adkaysan karaa 4 jeer cufkiisa.
Naqshadeynta indhaha ee xirfadeed ee labaad
Qaab -dhismeedka ku wareegsan dusha sare ee iftiinka ayaa si fiican loo daaweeyaa si wax ku ool ah loo xakameeyo dhaldhalaalka iyo dillaaca iftiinka kore, kaas oo yareeyay wasakhaynta iftiinka iyo bay'ada la ilaaliyo.
Dareeraha Microwave -ka iyo xakamaynta waqtiga waa ikhtiyaari.
Siyaabo badan oo loo xirxiro
Horizontal/vertical/derbiga rakibaadda rakibidda ayaa diyaar ah.
Unugga batteriga baabuurka oo heerkiisu yahay, oo leh 800 wareeg oo dambe, awoodda remaining 80% haray.
Maareynta baytariga BMS oo la hagaajiyay, oo leh lacag-dhaaf, dheecaan-dhaaf, wareegga gaaban, heer-kulka sare iyo farsamooyinka kale ee ilaalinta, si loo hagaajiyo awoodda wax-soo-saarka si caqli leh sida awoodda batteriga iyo fidinta waqtiga iftiinka. Ilaalinta heerkulka sare ee NTC ayaa ka dhigaysa mid aamin ku ah baakadka baakadaha.
MPPT (Raadinta dhibicda ugu badan ee awoodda) ee S6 waxay la socotaa koronto dhalinta tamarta qoraxda ee waqtiga-dhabta ah.
GOOBTA LA OGAAN KARO
Nooca Dareemaha Ang (Xagasha) h (Dhererka) d (Ballaca)
Dareemayaasha infrared 60 ° 4 ~ 6 m 4 ~ 7 m
Dareemayaasha Microwave 65 ° 4 ~ 8 m 5 ~ 10 m
Model Awood Batariga Jidka lacag -bixinta Iftiin daarmayaay'e Lumen Awoodda guddi cadceedda Awoodda baytariga LED QTY CCT
DMSL-S6-020 20W Li (NiCoMn) O2 MPPT · 2000 lm 30W 111Wh 40pcs 4000 ~ 6500K
DMSL-S6-020 20W LiFePO4 MPPT 2000 lm 30W 154Wh 40pcs 4000 ~ 6500K
DMSL-S6-030 30W Li (NiCoMn) O2 MPPT 3000 lm 30W 178Wh 64pcs 4000 ~ 6500K
DMSL-S6-030 30W LiFePO4 MPPT 3000 lm 30W 230Wh 64pcs 4000 ~ 6500K
DMSL-S6-040 40W Li (NiCoMn) O2 MPPT 4000 lm 48W 222Wh 88pcs 4000 ~ 6500K
DMSL-S6-040 40W LiFePO4 MPPT 4000 lm 48W 230Wh 88pcs 4000 ~ 6500K
DMSL-S6-050 50W Li (NiCoMn) O2 MPPT 5000 lm 48W 289Wh 88pcs 4000 ~ 6500K
DMSL-S6-050 50W LiFePO4 MPPT 5000 lm 48W 307Wh 88pcs 4000 ~ 6500K
DMSL-S6-060 60W Li (NiCoMn) O2 PWM 6000 lm 48W 400Wh 88pcs 4000 ~ 6500K
DMSL-S6-060 60W LiFePO4 PWM 6000 lm 48W 384Wh 88pcs 4000 ~ 6500K
Astaanta LED Cabbirka baakadaha LED Xagal dogob LED Awooda Wadista CRI Waxtarka iftiinka LED
Lumileds 3.0X3.0X0.52 mm 120 ° 1W ≥70 180-200 lm/W
Qaybinta iftiinka/gooni ahaanshaha qalooca
SIINTA MALAHA BEENTA
Dhererka cirifka / m Tiir fogaansho / m Ballaca waddada / m Lumens / lm Iftiimin / lux Midnimada
SOO SAAR QAYB
Qaabka Lambar Awood Cabbirka Badeecada L*W*H Aagga Xoogga Max WG Cabbirka Baakadaha L*W*H Rakibaya weel qty 20 ' Dejinta weel qty 40 '
20W 660x342x93 mm 0.225m² 7.2KG 745x415x145 mm 336 kumbiyuutarada 756 kumbiyuutarada
DMSL-S6-040DMSL-S6-050 DMSL-S6-060 40W 940x342x93 mm 0.321m² 12.2KG 1025x415x145 mm 270 kumbiyuutarada 540 kumbiyuutar
◀ Hubi in laambaduhu yihiin kuwo hagaagsan ka hor rakibidda.
◀ Fadlan xumbada dhexda ku hay xumada heerka si aad isugu dheellitirto.
◀ Ku dheji boolal xilliga rakibidda.
Rakibaadda waxay u baahan tahay hagid qof aqoon leh. Waxaa loo isticmaali karaa bannaanka.
Hubi in aasaaska uu taageeri karo iftiinka.
Ilaha iftiinka ee nalkaan waa in lagu beddelaa shaqaalaha alaab -qeybiyaha, wakiilka la cayimay, ama koronto yaqaan u qalma oo keliya.
Laambadani kuma haboona in si toos ah loo rakibo dusha sare ee alaabta guban karta.
Rakibaadda Nalalka Jidka Cadceeda
Model Ku talinta Dhererka Tiirka Laambadda Kaydinta maalmaha roobka Darajada IP Darajada IK Darajada culeyska dabaysha Heerkulka shaqada
DMSL-S6-020 4 ~ 5m 12 saacadood maalin kasta, 3 maalmood IP66 IK08 45m/s -10 ℃ ~ 45 ℃
DMSL-S6-030 5 ~ 6m 12 saacadood maalin kasta, 3 maalmood IP66 IK08 45m/s -10 ℃ ~ 45 ℃
DMSL-S6-040 6 ~ 7m 12 saacadood maalin kasta, 3 maalmood IP66 IK08 45m/s -10 ℃ ~ 45 ℃
DMSL-S6-050 7 ~ 8m 12 saacadood maalin kasta, 3 maalmood IP66 IK08 45m/s -10 ℃ ~ 45 ℃
DMSL-S6-060 7 ~ 8m 12 saacadood maalin kasta, 3 maalmood IP66 IK08 45m/s -10 ℃ ~ 46 ℃
Hore: Qeexida 1000 Lumens
Xiga: S5 taxane Solar Light
Qeexitaanka 8000 Lumens
batteriga jel terminal ee hore
CSW 15/30K500J baabuurta mishiinka korontada ku shaqeeya
Iftiinka sare G012 iftiinka cawska qoraxda la sta ...